Ibrahim Zakzaky: 'Mba India nyere m awa abụọ ịpụ ala ha' - BBC News Ìgbò
Ibrahim Zakzaky: 'Mba India nyere m awa abụọ ịpụ ala ha'
15 Ọgọọst 2019
Ibrahim El-Zakzaky kwuru na gọọmentị Naijirịa gwara mba India na ha amaghị ihe na-eme ya mana nke a bụ asị.
O kwuru na ọ bụ ọgwụgwọ ka ọ biara ịnata n'India, n'ihi na e mechaala ya nnyocha na Naịjirịa.
El-Zakzaky ahapụla Naịjiria gawa India
Anyị ga-erube isi n'ihe ụlọikpe kpebiri gbasara El-Zakzaky - DSS
El-Zakzaky zaghachịrị akwụkwọ gọọmentị Naịjirịa depụtara site n'ihe onyonyo o wepụtara n'India, ebe ya bụ Zakzaky kwuru na gọomentị India nyere ya naanị awa abụọ ịpụ ala ha ma ọ bụrụ na o kwenyeghị n'ihe gọomentị Naịjirịa kwuru.
O kwuru na ọ bụghi ya họpụtara ụlọọgwu ọ nọ n'India "n'agbanyeghị na ụlọikpe Naịjirịa ekwetela n'ụlọọgwụ ndị dọkịnta ya họpụtara ka ọ gaa n'India"
N'aka nke ọzọ, gọọmentị etiti nke Naịjirịa na-ekwu na ha anabataghị akwa onyeisi ndị "Islamic Movement of Nigeria" bụ El-Zakzaky na-ebe na-ekwu na ọnọdụ ya n'ụlọogwu ọ nọ n'India ka njọ karịa nke dị na Naijirịa.
Akwụkwọ Grace Gekpe onye bụ odeakwụkwọ Ministrị na-ahụ maka Mgbasaozi na Ọdinala nke Naịjirịa depụtara, kwuru na El-Zakzaky bidoro kpawa agwa na-ezighị ezi mgbe ha rutere Dubai ebe ha si gawa India.
Akwụkwọ a kwuru sị na ọ bụ El-Zakzaky ji aka ya họpụta ụlọọgwụ ọ chọrọ n'India, ma ndị ndu ga-echekwa ya, ma tinyekwa ndị dọkịnta so ya gaa.
'Gọọmentị Kaduna chọrọ igbu El-Zakzaky' - Ndị IMN
A kpọpụrụ Zakzaky ụlọikpe
Gekpe sị na " O kwuru ka e nye ya akwụkwọ-ikike-ngafe ya, mana ndị gọọmentị ha na ya so ekweghị, agwa ya bịara kawa njọ mgbe o ruru India mgbe ọ na-ekweghị ka e mee ya nnyocha ahụ"
Akwụkwọ a kwuru na " Ọ chọro ka e nye ya ohere ịgagharị etu ọ siri chọọ, kwuokwa ka etinye ya n'ụlọobibi na ọṅụṅụ nke dị okeọnụ ma chọọkwa ka o jiri aka ya họpụta ndị dokinta ga-elete ya anya n'ụlọọgwụ Medenta, India, mana nke a megidere ụkpụrụ ndị ọgwụgwọ".
Ihe ndị a El-Zakzaky na-achọ mere ka ndị ụlọọgwụ India wee iwe ma kwuo na ha dị njikere ịkpọlata ya Naịjirịa.
'Buhari na ndị Shia na-akpa nkata'
Ndị Shia gburu otu onyeisi anyị n'Abuja - Ndị uweojii
Image copyright IMN
Nkenke aha onyonyo Ụlọikpe kacha elu nke Kaduna nyere onyeisi ndị IMN ikike ịga India maka ahụike.
Gekpe kwuru sị na ndị mba India si na ọ (El-Zakzaky) gaghị atụrụ ha ihe ha ga-eme, ma kwuokwa na ha agaghị enye ya ohere ime ihe ọbụla gbasara otu ya n'India.
Gọọmentị Naijirịa arịọla gọomentị India mgbaghara maka agwa ọjọọ ha sị na El-Zakzaky kpasoro ha.
Gekpe kwuru na gọọmentị dị njikere ikpe El-Zakzaky ikpe otu o ziri ezi ma ọ lọghachị Naijiria.
O kwukwara na akwa El-Zakzaky na-ebe na ọnọdụ ya n'India ka ọnọdụ ya na Naịjirịa njọ, bụ mmiri awụrụ n'okwute.
Akụkọ ka na-abịa.
Lee akụkọ ga-amasị gị
Ụmụnwaanyị Abịa state aha ha na-ada ụda na Nigeria
Buhari akwụsịla Okoi Obono-Obla ọrụ n'ike
'Ịmachi inye dọla maka ntụbata nri ga-eme ka ndị mmadụ chịrị obi n'aka?'
Anyị kwadoro mgbachi ahịa maka nchekwa - Ndị ogbu anụ
Lee ihe nkiriga-amasị gị
Media caption'Ihe na-agbata m n'uche bú maóbú etu ka m ga-esi laa' - Onye ndị ntọrị nwụchịrị
N'ihi ebuteghi nri n'oge ka mmadụ jiri gbuo mmadụ ibe ya